Mpiasan’ny minisitera: am-perinasa ny «guichet unique» - ewa.mg
News - Mpiasan’ny minisitera: am-perinasa ny «guichet unique»
Nanomboka tamin’ity herinandro ity,
efa am-perinasa ny « guichet unique interministeriel» ho
an’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena. Miasa eo anivon’ny
sampandraharaha miasahana ny fitantanana ny mpiasa, etsy Mahamasina
Fomba entina hikarakarana haingana
ny antontan-taratasin’ny mpiasa izany. Ho an’ireo mpiasa alefa
hisotro ronono, efa miisa 1.400 ireo antontan-taratasy momba izany.
Ireo hafindra toerana kosa mahatratra 1.300. Ho an’ireo efa misotro
ronono, miisa 250.
Mahatratra hatrany amin’ny
3.500 kosa ny antontan-taratasy karakaraina momba ny fanamboarana
ny sokajin’asa ho an’ny mpiasa. Manodidina ny 300 kosa ny momba ny
fiakarana grady, fikarakarana momba ny tambiny arakasa…Ho an’ny
fanavaozana ny fifanarahana arakasa kosa dia mahatratra hatrany
Kendrena ho vita haingana ny
fikarakarana ireo antontan-taratasy izay nikatso nandritra hamehana
ara-pahasalamana lavareny teo. Kendrena mba tsy hisy fiantraikany
betsaka amin’ny mpiasa amin’ireo sokajin’asa misy azy avy iny
valanaretina nampitarazoka zavatra maro iny.
L’article Mpiasan’ny minisitera: am-perinasa ny «guichet unique» a été récupéré chez Newsmada.
Fandraofana ny fako: hanome kamiao 10 ny Samva ny minisitera
Eo ambany fiahian’ny minisiteran’ny Angovo, ny rano ary ny akoranafo ny Sampandraharaha misahana ny fanadiovana an’Antananarivo (Samva). Taorian’ny fihaonan’ny minisitra Andriamanga Vonjy sy ny mpiasa, ny 20 aogositra teo, nampanantena izy fa hahazo kamiao vaovao miisa 10 ho an’ny Samva amin’ny volana septambra ho avy izao, hanamafisana ny fandraofana fako eto an-dRenivohitra. Noresahina koa ny paikady manokana hisorohana ny mety ho firongatry ny valanareti-mifindra, sy ny hiatrehana ny fivahinian’ny papa ray masina eto Madagasikara.Tsiahivina fa efa nahazo kamiao miisa 11 ny Samva, ny taona 2018 teo, ary efa voafaritra tao anatin’ny tetibola 2019 ireto kamiao vaovao fanindroany miisa 10 ireto.Etsy ankilany, andraikitry ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) ny mandraoka ny fako, mitatitra izany hatreny amin’ny toby fanariam-pako, ary taterin’ny Samva eny Andralanitra avy eo.Njaka A.L’article Fandraofana ny fako: hanome kamiao 10 ny Samva ny minisitera a été récupéré chez Newsmada.
Zazalahy very maso
Nandalo fandidiana teny amin’ny hôpitaly ilay zazalahikely, fito taona, niharan’ny herisetra nataon’olon-tsy fantatra, tany Ankililoaka Toliara Faharoa. Nisy naka ny voamason’io zazalahikely io, ny faran’ny herinandro lasa teo. Izany no nidirany hôpitaly tany Toliara. Mitohy kosa ny fanadihadiana sy fikarohana an’ireo heverina no nahavita izany. L’article Zazalahy very maso est apparu en premier sur AoRaha.
Kidnapping teny Soavina : Toniziana sy karàna indray no lasibatra
Teratany vahiny miisa roa indray no lasibatra tao anatin’ny ora vitsy. Nitrangana fakana an-keriny ny sabotsy 08 desambra lasa teo, teny Soavina ,Tanjombato. Rangahy teratany Indianina fantatra amin’ny anarana Malik Karmaly, mpandraharaha Indostrialy ao amin’ny vondrona Habibo, no lasan’ ny jiolahy nitam-basy. Araka ny fampitam-baovao ofisialy navoakan’ny “Cfoim”, na ny vondron’ireo teratany Indiana mizaka ny zom-pirenena frantsay monina eto Madagasikara, dia teratany Tonizianina antsoina hoe Sofiane Ormani, mpandraharaha manodidina ny 47 taona koa no lasa tamin’io andro io ihany. Tokony ho tamin’ny 12 ora antoandro, fotoana maha be mpandalo sy fiara mifamoivoy no nisehoany, raha ny vaovao voaray avy eo anivon’ny vondron’ireo teratany mizaka ny zom-pirenena frantsay hatrany. Tao anatin’ny fotoana fohy no nitrangan’izany, ary matihanina no nanao azy, tsy latsaky ny efadahy ireo jiolahy raha ny fahitan’ny teny amin’ny manodidina ny fomba nanatanterahana azy sy ny fitaovana nampiasain’ireo mpaka an-keriny. Tao anaty fiara raitra, ilay nokendrena. Nosakanan’ireo mpaka an-keriny avy eo aloha ilay fiara 4×4 niloko mainty nitondra ireo lasibatra. Rehefa tratry ny ankisisika nampijanonan’ireo jiolahy mitam-basy ilay teratany karàna, dia nanapoaka basy izy ireo, ka nentina an-terisetra tamin’ny fiarany ihany ilay teratany karàna, raha filazan’ny nanatri-maso. Nampiasa fiara roa Express miloko fotsy ary mbola raitra ireo mpaka an-keriny. Midika fa manan-takao ireto farany, na ny mpaniraka azy ireo. Voalaza aza fa nisy fiara hafa, marika Partner miloko maitso koa no nampiasain’izy ireo nitsoaka nihazo nianatsimo nony avy eo. Ny olona no nahita, ka nampandre haingana ny polisy, izay efa nampisavorovoro ihany koa ny feom-basy indroa nisesy nanao ny fikarohana avy hatrany, saingy efa tsy tratra ireo olon-dratsy. Nandritra izany fikarohana izany kosa anefa dia efa hita teny Ambatobe ny fiara nitondran’ireo jiolahy mpaka an-keriny. Hatreto, tsy nahazoam-baovao firy ny mikasika ity mpandraharaha Teratany Tonizianina, izay voalaza fa eo am-pelatanan’ny mpaka an-keriny. Fantatra ihany koa fa samy tao anatin’ilay fiara tsy mataho-dalana iray, ireto farany, izao lasibatra izao. Trangana fakana an-keriny teratany Indianina fahadimy niseho tao anatin’ny volana iray io niseho tamin’ny sabotsy lasa teo io. Hita fa tsy nisy fitsaharana izany ny volana novambra no nankaty. Izay nahalasibatra zanaka karana vavy 11 taona tany Manerinerina, nitohy tamin’ny Riaz Hassim tompon’ny Makiplast izany, ka voatazona teo amin’ny enina andro teo ity nalaina an-keriny no votsotra. Ny iray karàna lahy, antsoina hoe Nassir Sivjee, mpandraharaha amin’ny Conforama etsy Tsaralalàna, ary ny teratany karana tompon’ny orinasam-pitaterana “Transfy” lasibatra tany Toamasina. Mandeha ny fikarohana, ary efa fantatra fa tsy olon-tsotra izy ireo. Ny tsikaritra aloha dia nirongatra ity resaka kidnapping ity, nialohan’ ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany, hatramin’izao hiatrehana ny fihodinana faharoa izao. Misy ifandraisany ve ireo sa tambajotra samihafa? Valérie R. L’article Kidnapping teny Soavina : Toniziana sy karàna indray no lasibatra est apparu en premier sur .L’article Kidnapping teny Soavina : Toniziana sy karàna indray no lasibatra a été récupéré chez Triatra.